Gudoomiye Ku Xigeenka Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka oo Shaaca Ka Qaaday Khatar uu Sheegay inay ka Soo Fool Leedahay Dastuuka Qabyo Qoraalka (Dhageyso) | Anti-Tribalism
← Xildhibaan Aadan Madoobe iyo Xildhibaan Xaabsade oo maanta loo duuliyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya
Wasiirka Dastuurka oo Qaab Qabiil u difaacay dastuurka Puntland sheegayna kan qaranka Soomaliyeedna mid KMG ah →
Muqdisho Saturday, April 21st, 2012 (MMG) Gudoomiye ku xigeenka guddiga dastuurka ee baarlamaanka KMG Soomaaliya Xildhibaan C/qaadir Sheekh Ismaaciil oo maanta wareysi siiyey Shabakadan ayaa shaaca ka qaaday inuusan jirin wax dastuur ah oo ay og yihiin oo dalka loo sameynayo, isagoo dhinaca kalana ku tilmaamay dastuurka Qabyo Qoraalka mid ummada u horseedaya dhibaato hor leh.
“Waxaa la sameeyey guddi dastuur oo madax bannaan, waxaa jiray guddi heer baarlamaan intiiba hadda meel baa la iska dhigay, intaas hadda aan ku sheegay ama siyaasiyiin ha ahaato ama shisheeye ha ahaato ayaa hadda wata, guddigii qorayeyna kama warqabaan.” Ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka guddiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya.
C/qaadir Sheekh Ismaaciil wuxuu ku dooday in dastuur looga baahanyahay inuu ku yimaado rabitaanka dadweynaha iyo sharciyad hase yeeshee dastuurka Qabyo Qoraalka uu noqday mid gacanta ugu jira dad aan Soomaali ahayn.
“Waxaa la yiri qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha, macnaha waa in dadka lagala tashado laakiin odayaal iyo dad inta meel la isugu keenay oo waxna ka ogeyn la yiraahdo gacanta taaga waa uga digeynaa.” Ayuu yiri xildhibaanka oo ku taliyey in odayaasha Soomaaliyeed ee qabiilada aysan isku ceebeynin ansixinta dastuurka.
Xildhibaanka oo aan weydiinay bal in wax xiriir ah uu ka dhexeeyo baarlamaanka iyo guddiga dastuurka ee madaxa bannaan ayaa sheegay in labada dhinaca aysan ka warheyn sida hadda wax u socdaan iyo dastuurka cusub ee hadda dalka loo sameynayo.
“Waa waxba kama jiraan waayo waxaan oo dhan waa laga gudbay” ayuu yiri isagoo ka hadlay qorshaha roadmap-ka ee salka u ah dastuurka.
Wuxuu ku eedeeyey xukuumadda hadda jirta inay ku fashilantay hawlihii loo igmaday taasina ay keentay inay soo saarto qorshaha roadmapka iyo dastuurka cusub.
Isagoo ka jawaabayey waqtiga ay dhacayso doorashadii madaxweynaha ee ay horey ugu baaqeenmudanayaasha baarlamaanka ayuu xildhibaanku sheegay inuusan waxba iska bedelin waqtiga doorashada hase yeeshee wuxuu sheegay in la fidiyey mudadii loo qabtay qabashada araajida musharaxiinta baarlamaanka sababo la xiriira codsiyo ka yimid dadka raba inay tartanka ka qeybgalaan.
“Sheekh Shariif isagoo jooga ayaan mar wakba doorashada la qaban lahaa isagoo maqan lama qabteen.” Ayuu yiri xildhibaan C/qaadir Sheekh Ismaaciil oo ku adkeystay inay doorashada ka dhacayso Muqdisho 30-ka April oo wax yar naga xigto.
Dastuur sameynta Puntland
Xildhibaan oo aan weydiinay sida uu u arko sameynta dastuurka cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in lagu degdegay waqtigan maadaama isagoo sheegay in maamul goboleedyada looga baahan yahay in sharciyadooda ay waafaqaansharciyada dawlada dhexe.
“Maamul goboleedyadu waa u madax bannaan yihiin inay sameystaan xeer hoosaadyo iyo arimo iyaga u gaar ah laakiin in waqtigan Puntland ay tiraahdo dastuur baanu qoreynaa waa arin lagu deg degay.” ayuu yiri xildhibaanka.
HALKAANA WAAD KA DHAGEYSAN KARTAA